Dingana lehibe… : hisy isan-taona ny « Festival de théâtre » (NewsMada) | AEMW
Dingana lehibe… : hisy isan-taona ny « Festival de théâtre » (NewsMada)
Manomboka amin’io taona ho avy io, hisy ary hitohy isan-taona ny « Festival de théâtre”, hetsika iray goavana, mbola tsy nisy mihitsy hatreto, hanomezan-danja ity karazan-javakanto iray ity. Anisan’ny nisongadina tamin’ny nambaran-dRandrianierenana Henri, mpisehatra fanta-daza eo amin’ny tontolon’ny sarimihetsika sy ny seho an-tsehatra, io.
Eo am-panomanana ity « Festival de théâtre” ity indrindra ny Akademy theatre Antananarivo, sekoly fampianarana teatra, naorin’ny kaompania Johary, sy Randrianierenana Henri. Raha ny voalazan’ito farany, ho matihanina avokoa ireo mpisehatra hikarakara sy haneho ny talentany mandritra ity hetsika goavana ity.
Efa natomboka tamin’ny 18 avrily teo ny fanofanana ny andiany voalohany amin’ireo hiditra eo amin’ny tontolon’ny teatra sy ny horonantsary. Mihoatra ny 100 ny isan’izy ireo ka enina taona ny kely indrindra ary 72 taona ny zokiny indrindra. Notontosaina tetsy amin’ny Dôme Ankorondrano, ny 6 aogositra teo, ny fampisehoana famaranana ity fiofanana dingana voalohany ity.
Hanomboka ny 12 septambra izao kosa ny fiofanana ho an’ny andiany faharoa. Entanina handray anjara amin’izany ireo liana hiditra lalindalina kokoa eo amin’ny tontolon’ny teatra sy ny sarimihetsika. Tokony ho 10 taona, raha kely indrindra izy ireo ary tsy ferana kosa ny zokiny indrindra. Hiara-dalana amin’ity andiany faharoa ity ny fanohizana ny fampianarana ho an’ireo andiany voalohany.
Nomarihin-dRandrianierenana Henri fa ireto mpiofana ireto avokoa no hanatontosa ny “Festival de théâtre”: hamorona ny piesy, hamelona izany an-tsehatra, sns. Mbola misokatra moa ny fisoratana anarana, etsy amin’ny Tahala Rarihasina Analakely, amin’ity fiofanana ity.
← Rugby – «Can 1B Junior» : miandry ny mpijery hanohana azy ny Makis, anio (NewsMada)
Fanatanjahantena an-tsekoly : atao any Taolagnaro ny JNSS (NewsMada) →